Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : 2011
Posted by Maung Yit at 10:53 PM 1 comment:
Book Review - Introducing Science – Dr.Khin Maung Win
စာအုပ်မည် - သိပ္ပံမိတ်ဆက်
ဘာသာပြန် - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
မူရင်းစာအုပ်မည် - Introducing Science
ပထမအကြိမ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၁
တန်ဖိုး - ၁၈၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ - ၁၇၈
စာအုပ်အကြောင်း - ရုပ်ပုံကားချပ်များဖြင့်သိပ္ပံဘာသာရပ်အကြောင်းကိုရှင်းလင်းသွားခြင်း
Posted by Maung Yit at 8:57 PM No comments:
ရေးသူ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
ပထမအကြိမ် - ၁၉၉၁ စက်တင်ဘာ(လောကသစ်စာပေ)
ဒုတိယအကြိမ် - ၂၀၁၁ ဇူလိုင်
စာမျက်နှာ - ၁၇၀
အခန်း - ၈၁ ခန်း
အပိုင်းများ - အစုသီအိုရီ၊ရေတွက်နည်းများ၊ဂျီသြမေတြီနည်းပညာနှင့်ဂဏာန်းသင်္ချာ၊
အတွင်းသရုပ်ဖော်ပုံများ - ကာတွန်းမောင်ရစ်
အတွင်းရုပ်ပုံများ - မင်းသားမင်းသမီးပုံများ-စိုးသူ၊မေဆွိ၊ကျော်သူ၊သုမောင်၊ခင်သန်းနု၊ရန်အောင်၊
Posted by Maung Yit at 1:48 PM No comments:
Book Review – Khin Myo Chit’ Works – Khin Myo Chit & Translated by Dr. Khin Maung Win
စာအုပ်အမည် - ခင်မျိူးချစ်၏စာ
ရေးသူ - မူရင်းအင်္ဂလိပ် ခင်မျိူးချစ် နှင့်
ဘာသာပြန်သူ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
၀တ္ထုတိုများ - 13 Caret Diamond, Her Infinite Variety, Electra Trumpths, Bearer of the Betel Casket, The Golden Princess, Home-Coming, Come With Live Me, Who Am I?, U Thu Ka,
The Late Princess Mindat, The Triumvirate of the Myanmar Stage, Shumawa U Kyaw
ဆောင်းပါးများ - The Trouble With You and Me, Let’s Call Them Name, The Art of Myanmar
Zat-Pwe, The Nativity of Bodhisatta on Zat-Pwe Stage
စာအုပ်ပုံစံ - ဘာာသာပြန်သူ၏အမှာနှင့်မူရင်းအင်္ဂလိပ်များကိုဘာသာပြန်များနှင့်တွဲကတင်ဆက်ထားပါသည်။
အများစုမှာ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းဘာသာပြန်ထားပြီး Who Am I? ကိုတက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်းကလည်းကောင်း Home-Coming ကိုဂျူနီယာဝင်းကလည်းကောင်း ဘာသာပြန်ထားပါသည်။
အတွင်းပန်းချီများ - ပန်းချီဆရာကြီးဦးဘကြည်၏မူရင်းလက်ရာများကိုသုံးထားသည်။
တန်ဖိုး - ၂၅၀၀ ကျပ်
စုစုပေါင်း - ၁၆ပုဒ် ( ၀တ္ထု ၇ ပုဒ်၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အကြောင်း ၅ပုဒ်၊ ဆောင်းပါး ၄ပုဒ်)
၀တ္ထများနှင့် ဆောင်းပါးဘာသာပြန်များ အာလုံးမှာ မဂ္ဂဇင်းများတွင်ဖော်ပြပြီးသည်များ ဖြစ်ပါသည်။ယင်းကို
စုစည်းကာ ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၀တ္ထုများတွင် (၁၃ရတီစိန်) တွင် ဂျပန်ခေတ် စိန်အရောင်းအ၀ယ် ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရမည်။
Posted by Maung Yit at 2:48 PM No comments:
Three Years Under The Japs -ဂျပန်ခေတ်မှာသုံးနှစ်တာ KhinMyoChit+Juniorwin
စာအုပ်အမည် - Three Years Under The Japs -ဂျပန်ခေတ်မှာသုံးနှစ်တာ
ရေးသူ - KhinMyoChit(မူရင်းအင်္ဂလိပ်)+ဂျူနီယာဝင်း(ဘာသာပြန်)
တန်ဖိုး - ၁၀၀၀ကျပ်
ပထမအကြိမ် - ၁၉၄၅ (အင်္ဂလိပ်လို)
ပထမအကြိမ် - ၂၀၁၁ သြဂုတ် (အင်္ဂလိပ်+ဗမာ)
ပထမအကြိမ်ပုံနှိတ်စဉ်က - Published by KHINMYOCHIT 24 Zabuyit Road,Sanchang
Printed at THE ROYAL STATIONARY, 408-410 Dalhousie Street, RANGOON
မူရင်းဒေါ်ခင်မျိူးချစ်ရေးသားသောThree Years Under The Japs ကိုဂျူနီယာဝင်းကနေဘာ
Posted by Maung Yit at 10:39 PM No comments:
Encyclopedia – Human Body – Translation –juniorwin
စာအုပ်အမည် - အမေးအဖြေစွယ်စုံကျမ်း - လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ
ရေးသူ - ဘာသာပြန် - ဂျူနီယာဝင်း
ပထမအကြိမ် ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ
တန်ဖိုး - ၁၀၀၀ ကျပ်
အခန်း- ၁၃ ခန်း
စာမျက်နှာ - ၁၂၀
Questions & AnswersnEncyclopedia 2006 – Human Body အမည်ရှိစာအုပ်ကိုအပိုင်းလိုက်ဘာသာပြန်
အမှန်တော့လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်း - Human Bodyဟူသောစာအုပ်မျိူးကိုတွေ့လျှင်ကိုင်ကြည့်ဖို့ပင်စိတ်
Posted by Maung Yit at 3:46 PM No comments:
Book Advertisement – Puzzle – Dr.Khin Maung Win
စာအုပ်အမည် - ညဏ်စမ်း Puzzle
ရေးသူ ဘာသာပြန် - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
တန်ဖိုး - ၁၀၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ - ၉၆
Posted by Maung Yit at 10:24 PM No comments:
စာအုပ်အမည် - ရှိတ်စပီးယားပုံဝတ္ထုများ
ဘာသာပြန်သူ - ခင်မျိူးချစ်
ပထမအကြိမ် - ၁၉၆၁ ဒီဇင်ဘာလ
ဒုတိယအကြိမ် - ၁၉၆၂ ဇွန်လ
တတိယအကြိမ် - ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ
စာမျက်နှာ - ၂၆၀
Posted by Maung Yit at 8:45 PM No comments:
စာအုပ်အမည် - ကလေးများအတွက်ပထမဆုံးသိပ္ပံအဘိဓါန်(ဘာသာပြန်)
ရေးသူ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း နှင့်တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
မူရင်း - Oxford First Science Dictionary
စာမျက်နှာ - ၇၀
အခန်း၃ခန်းပါဝင်ထားပြီးအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ A မှ Z အထိအင်္ဂလိပ်စာလုံးများကိုအဘိဓါန်စာလုံးများဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးသားထားသည်။
air - လေ
Air is the visible gas all around us. We breathe air to stay alive.
Posted by Maung Yit at 8:36 PM No comments:
Book Review - Gift of Laughter – Khin Myo Chit
စာအုပ်အမည် - Gift of Laughter
စာရေးဆရာ - Khin Myo Chit
Parami Bookshop ပါရမီ စာပေ
အတွင်းသရုပ်ဖော်ကာတွန်းပုံများရေးဆွဲသူ - ကာတွန်းမောင်ရစ်
စာမျက်နှာ - ၈၃ မျက်နှာ
အခန်းပေါင်း - ၈ ခန်း
ထွက်ရှိသည့်ခုနှစ် - ၂၀၁၁ မေလ
Posted by Maung Yit at 10:12 PM No comments:
Book Review – Q & A Encyclopedia – Science and Technology
စာအုပ်အမည် - အမေးနှင့်အဖြေ စွယ်စုံကျမ်း သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
ရေးသူ -ဘာသာပြန် - ဂျူနီယာဝင်း
မူရင်း - – Q & A Encyclopedia – Science and Technology 2006
ထွက်ရှိသည့်ခုနှစ် - ဇူလိုင်လ၂၀၁၁
စာမျက်နှာ - ၁၃၈
အခန်း - ၁၄ခန်း
ဂျူနီယာဝင်း၏အမှာစာအရထိုစာအုပ်သည်၂၀၀၆ခုနှစ်ထုတ်– Q & A Encyclopedia – Science and Technology မှအပိုင်းပေါင်း၈ခန်းမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။စကြာဝဌာ၊ကမ္ဘာဂြိလ်၊ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊
Posted by Maung Yit at 10:31 PM No comments:
ယခုတင်ပြလိုက်သောHouse Of Saddam ရုပ်ရှင်ကားမှာအမေရိကန်ကားတစ်ကားဖြစ်၍၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ
SaddamHussein(ဆဒ္ဒါန်ဟူစိန်)(၁၉၃၇-၂၀၀၆)သည်အီရတ်သမ္မတအဖြစ် ၁၉၇၉မှ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကြား
ပါဝင်ခဲ့သည်။Al-Bakrသည်သမ္မတဖြစ်လာသည်။ ဆဒ္ဒါန်သည် အီရတ်သမ္မတ Al-Bakrနှင့်အပြိုင် သြဇာ
‘House of Sadda’ရုပ်ရှင်သည်ဤနေရာမှစသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်စပြပြချင်းမှာ
တွင်တွေ့ဆုံကြသည်။ထိုတွေ့ဆုံပွဲကားအီရတ်သမ္မတAl-Bakrကိုရာထူးမှအနားယူဖို့ ချိမ်းခြောက်ပြောဆိုကြသောအခန်းဖြစ်သည်။Al-Bakrသည်သူ့ဘက်မှရပ်တည်မည် ဟုယုံကြည်ထားသူများကသူ့အပေါ်သစ္စာမရှိကြောင်းသိသွားသောအခါမတတ်သာပဲ လက်ခံလိုက်ရသည်။နောက်နေ့တွင်ဆဒ္ဒါန်၏ဆဒ္ဒအတိုင်း“ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ရာထူးမှ
းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သူသည်တခါတုန်းကဒီလိုအဆိုအမိန့်တစ်ခုကိုဆိုခဲ့ဘူး၏“The Law is
anything I write onapiece of paper.”“စာရွက်အပိုင်းအစတစ်ခုပေါ်မှာကျွနိုပ်ကောက်
Posted by Maung Yit at 12:55 AM No comments:
စာအုပ်အမည် - ရေအကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဘာသာပြန် - တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
မူရင်းစာအုပ် - Wonderful Water by Cheryl Palin
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ပထမအကြိမ်
စာမျက်နှာ - ၄၆
အခန်း - ၁၀ ခန်းနှင့်ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်း၊အိမ်စာများနှင့်ပုံပြအဘိဓါန်
Posted by Maung Yit at 3:50 PM No comments:
Book Review - Basic New Maths – Dr. Khin Maung Wi...
Book Review – Khin Myo Chit’ Works – Khin Myo Chit...
Three Years Under The Japs -ဂျပန်ခေတ်မှာသုံးနှစ်တာ...
Encyclopedia – Human Body – Translation –juniorwin...
စာအုပ်အမည် - ကလေးများအတွက်ပထမဆုံးသိပ္ပံအဘိဓါန်(ဘာသာ...
Book Review – Q & A Encyclopedia – Science and Tec...